Ireo Jeep Ny jiro bumper aoriana dia manampy amin'ny fampitomboana ny fiarovana amin'ny tontolo ratsy rehefa mitondra fiara, fahombiazana tsara amin'ny porofo amin'ny rano ary tsy mahazaka. Mety amin'ny taona 2018+ Jeep Wrangler JL sy 2020 Gladiator JT.
Te hanome ny anao ve ianao Wrangler mitondra fijery miavaka kokoa sy fahitana lehibe kokoa amin'ny alina? Ny jiron'ny Jeel JL ao aoriana dia hanome jiro LED nohavaozina ny fiaranao miaraka amin'ny endrika tsy manam-paharoa sy maoderina, ary koa ny fitomboan'ny fiarovana, ny fahitana ary ny fomba amin'ny alina. Ireo jiro ireo dia vonona hampiasaina, tsy mila manova ireo tariby mandeha am-boalohany fiara, fanjifana herinaratra ambany ary fika LED mandritra ny androm-piainana lava. Mety amin'ny taona 2018+ Jeep Wrangler JL 2020 Gladiatera JT.
famaritana ny Jeep Jiro javom-bavony aoriana
Car ho an'ny Jeep
lafiny Haben'ny oem tany am-boalohany
Color Lens Setroka / Red
Lokon'ny hazavana Red
Akora ABS + PC
2018-2019 Jeep Wrangler JL (Fanatanjahantena / Fanatanjahantena 2-varavarana / 4-varavarana)
2020 Jeep Gladiator JT (Fanatanjahantena / Fanatanjahantena)
2018-2019 Jeep Wrangler JL (Sahara / Rubicon 2-varavarana / 4-varavarana)